चोटपटक र sprains जस्ता घाइते देखि, कुनै एक प्रतिरक्षा छ। आफ्नो पीडादायी नतिजा सामना विभिन्न तरिकामा प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा तरिका - यो नाम "Dolobene" प्रयोगको लागि यस लेखमा छलफल गरिनेछ जो निर्देशन भइरहेको जेल को प्रयोग हो।
जेल विरोधी भडकाऊ, analgesic, antithrombotic र dermatoprotektornymi गुण जो लागूपदार्थको बुझाउँछ। dimethyl sulfoxide, हेपरिन सोडियम र dexpanthenol: तयारीको तीन लागूऔषधको हुन्छन्। Dimethyl sulfoxide, छाला, श्लेम लाग्एको झिल्ली र जीवाणुहरु को झिल्ली मार्फत सजिलै र चाँडै penetrates सुनिंनु कम गर्छ। शरीर यसको कार्य अन्तर्गत थप गहिरो र चाँडै दबाइ को अन्य घटक भित्र पस्नु गर्न। सोडियम हेपरिन पनि विरोधी भडकाऊ गुणहरू, छ यसलाई उपचर्म capillaries गठन microthrombuses भंग गर्न मद्दत गर्छ। संयोजी ऊतक र सुधारिएको रक्त स्थान बढी प्रभावकारी पुनर्जनन छ यसको कार्य गरेर। छाला मा प्रवेश पछि Dexpanthenol क्षतिग्रस्त छाला मर्मत गर्न मद्दत गर्छ जो pantothenic एसिड, परिवर्तन भएको छ।
सङ्केत गर्छ र प्रयोगको विधि
दबाइ "Dolobene" निर्देश पुस्तिका तपाईं चोटपटक, दुखेको मांसपेशीमा, मुलायम Tissues, tendons जस्ता घाइते को उपचार मा प्रयोग सुझाव। दबाइ पनि यस्तो स्थिर काँध, tendinitis, bursitis, गठिया, deforming पुराना ओस्टियोआर्थराइटिस, तीव्र neuralgia, sciatica रूपमा चोट लागेको र रोगबाट प्रभावित बंधन को बहाली लागि निर्धारित छ।
क्षतिग्रस्त क्षेत्र वा नजिक - जेल "Dolobene" निर्देशन पातलो पत्र संग छाला लागू सल्लाह दिएको छ। दबाइ यो घाउ र abrasions मा गिर भनेर जोगिन, एक वर्दी र सजिलो आन्दोलन द्वारा rubbed गर्न आवश्यक छ। यो प्रक्रिया एक दिन 2-4 पटक प्रदर्शन गर्नुपर्छ। को जेल ड्रेसिङ को आवेदन मा प्रयोग गर्न आवश्यक पट्टियाँ airtight गुण संग। साथै, दबाइ प्रक्रिया समयमा सम्पर्क phonophoresis जेल रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्रक्रिया समयमा, यो अल्ट्रासोनिक छालहरू को कार्य complements। अवधि उपचार जेल एक चिकित्सक द्वारा निर्धारित र व्यक्तिगत रोगी निर्भर छ।
जेल "Dolobene" निर्देश पुस्तिका को प्रयोग गर्न contraindications रूपमा लागूपदार्थ, साथै hepatic वा गुर्दे विफलता, ब्रोन्कियल अस्थमा गर्न संवेदनशीलता वृद्धि वर्णन गर्दछ। प्रयोग जेल यस्तो एनजाइना, रूपमा रोगहरु संग मान्छे को लागि contraindicated छ अस्थमा, स्ट्रोक। Expectant र नर्सिङ आमा जेल "Dolobene" प्रयोग मा निर्देशन पनि नगर्नू। उसलाई र पाँच वर्ष पुरानो अन्तर्गत छन् जो बच्चाहरु नियुक्त छैन।
त्यहाँ प्रयोग र सँगै निरूपण अन्य लागूपदार्थको संग मा प्रतिबंध हो। को जेल आफ्नो अवशोषण बृद्धि हुन सक्छ रूपमा, छाला को लागि यो अन्य स्थानीय धन संयोजनमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। तसर्थ, छाला को क्षतिग्रस्त क्षेत्र अर्को दबाइ लागू भने, यो राम्ररी तपाईं दबाइ "Dolobene" लागू अघि साफ गर्नुपर्छ। यो जेल sulindac समावेश एजेन्ट संग संयोजन मा प्रयोग गर्न सकिँदैन। यो परिधीय neuropathy विकास गर्न सक्छ। साथै, यो घाउ, श्लेम लाग्एको झिल्ली र पोस्ट-ओपरेटिव scarring, dermatitis वा dermatosis भइरहेको छाला खोल्न लागू गर्न निषेध गरिएको छ।
साइड इफेक्ट दबाइ प्रयोग गर्दा उत्पन्न कि, जेल लागू छन् क्षेत्रमा छाला को खुजली र बलिरहेको समावेश हुन सक्छ। पसिना secreted र exhaled हावा लसुन गन्ध हुनसक्छ - यो अनुप्रयोग "Dolobene" समयमा गठन dimethylsulfide को रिलीज कारण हो। तयारी समीक्षा, सामान्यतया समावेश असंतोष यसको अप्रिय गन्ध छ।
एक विशेषज्ञ जेल "Dolobene" संग परामर्श बिना प्रयोगको लागि सिफारिस गरिएको छैन। राख्न यो एक तापमान छैन +25 उच्च भन्दा ° सी हुनुपर्छ
चिकित्सा रन-अफ कम गर्न: "Lasix" (प्रयोग को लागि निर्देश)
"Mutsitus": प्रयोग, वर्णन, समीक्षा र analogues लागि निर्देशन
Valerian निकाल्ने। उपयोगी गुणस्तर
Thiamine bromide: सङ्केत, कार्य
इजरायल दरवाजे "multilok": समीक्षा
"Vago" (तार क्लिप): कसरी प्रयोग गर्ने निर्देशन
ग्रीस मा अक्टोबर - मौसम Beckons!
कस्ता गुणहरू आईएल-38 possesses - घरेलू उत्पादन vozdushki?
थर्मोस्टेट र बिजुली संग ताप लागि तीन-तरिका वाल्व
ग्लिसेरिन - यो के हो? गुण र पदार्थ प्रयोगका। ग्लिसेरिन कसरी बनाउने?